ST 2022-6 မော်ကွန်းတိုက် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » Tag Archives: ST 2022-6
Tag Archives: ST 2022-6
IBC2017 မှာ PHABRIX-Nevion အော်ပရေးရှင်းဒီမိုအစွမ်းထက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အတူ Flexible Hybrid ကိုအိုင်ပီ / SDI မီဒီယာ Delivery Highlight
Berkshire, ဗြိတိန် - 16 သြဂုတ်လ 2017 - စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်းအထူးကု PHABRIX အဆိုပါကုမ္ပဏီများ '' SMPTE ST 2017- ၏အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါနှင့် SMPTE ST 2110-2022-သဟဇာတ IP ကိုဖြေရှင်းနည်းများကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန် IBC6 မှာ Nevion, virtualised မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်၏ပံ့ပိုးပေးနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ဖြစ်ပါတယ်။ အိုင်ပီမီဒီယာ Solutions (ရည်ရွယ်သည်) အတွက်မဟာမိတ်များ၏ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ ST 2110 နှင့် ST 2022-6 ယင်းက de ဖြစ်လာကြပြီ ...